Ra iisal wasarahii hore oo u Hanbaleeyey Bulshada Gobolka Banaadir | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ra iisal wasarahii hore oo u Hanbaleeyey Bulshada Gobolka Banaadir
“HAMBALYO BULSHADA GOBOLKA BANAADIR”
Maanta 28.01.2021 Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu saxiixay Xeer uu ku meelmarinayo go’aankii Golaha Shacabka BFS uu 27.06.2020 ku ansixiyey 13ka xubnood ee matalaadda bulshada G. Banaadir, gaar ahaan tan deegaanku, ay ku yeelanayso Aqalka Sare ee BFS.
Waa guul iyo xaq u soo hoyday bulsho-deegaanka Gobolka iyo caasimaddaba. Shacabka Banaadir waa canshuur bixiyeyaasha qaranka, waa kuwa wiilashooda iyo gabdhahoodu ay dhiigga u daadinayaan difaaca dalka iyo dadka, mana ahayn inay matalaad siyaasadeed ka waayaan goleyaasha sharci dejinta dalka. Guushatan muddo dheer ayaa la sugayey, shacabka G. Banaadirna ammaan ayuu ku mutaystay samirka iyo dulqaadka uu muujiyey.
Madaxda iyo shacabka dowlad-goboleedyada dalka waxaan ugu baaqayaa inay soo dhaweeyaan, taageeraan oo hambalyeeyaan xaqa u soo daahiray walaalahood shacabka G. Banaadir iyo reer Muqdisho.
Sidaas darteed, ALLE bacdigiis waxaan u mahadcelinayaa Madaxweyne Farmaajo oo ku dhiirraday inuu soo dhiciyo xaqa ummadda G. Banaadir, kaddib markii ay u bareeri waayeen ama ay hagradeen Madaxweyneyasshii isaga ka horreeyey. Sidoo kale waxaan qaddarin iyo mahadcelin u gudbinayaa BFS, Guddoomiyaha G. Banaadir/Duqa Magaalada Muqdisho oo dowr lama illaawaan ah ka ciyaaray taabbagelinta mashruucakan waddaniga ah iyo dhammaan intii dadaal ku bixisay arrintaan.
Ugu dambayn, RW Rooble iyo xukuumaddiisa waxaa looga fadhiyaa inay dardargeliyaan dhamaystirka habraaca sidii ay senatarrada G. Banaadir uga mid noqon lahaayeen Aqalka Sare ee Baarlamaanka 11aad.
Previous articleMaamul Goboleydka Hirshabeele oo taageero kala dhacay ogolaanshada Maqaamka Gobolka Banaadir
Next articleFaisa Abuukar Ibrahim waxaa gacantiisa ku dilay Abbaheed Abuukar Ibraahim
Shir ayaa uga socda xarunta Madaxtooyada Galmudug Madaxwaynaha DFS, RW Rooble iyo sadexda Maamul goboleed ee Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir. Shirka...
Qof walba marka uu dilo wuxuu ku aasi jiray gurigiisa dhexdiisa...